I-Android ekugqibeleni iyathetha ngobungozi bebhodi eqhotyoshwayo, emva kweapile
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Android ekugqibeleni ijongana nobungozi bebhodi eqhotyoshwayo, emva kweApple
Ukulindela okuzayo I-Android 12 Uhlaziyo lwe-OS, olucofa embizeni ezinye iinyanga ezimbalwa, thina & apos sigcine amehlo kunye neendlebe zihlwiliwe ngazo naziphi na iindaba malunga nokuba uphando izakuzisa etafileni. Asinakunceda kwaye sizibuze ukuba izakuhambelana njani ngokuchasene Iiapile kunye neeapos uhlaziyo oluzayo, IOS 14.5 .
Isongelo sangasese seApple eQeqeshiweyo
Sifumene ku Abaphuhlisi beXDA (ngokusebenzisa Mna okuninzi ) ukuba inguqulelo entsha ye-Android imalunga nokutsala i-ace phezulu kumkhono wayo—ahem, ukusuka phezulu Apple & aphume kumkhono-xa kufikwa kwinkalo ethile entsha yabucala.
Kubonakala ngathi iGoogle ayisiyo & apos; ayizingci kakhulu ngokufunda kwezinye iinkosi kwishishini, emva kwayo yonke loo nto. Kwaye ngakumbi iApple kunye neapos; eyimfihlo yabucala Ukulandelela ukuKhangela ngokuSebenzayo Inqaku lokuba yinto ebonakalayo yintsholongwane kuhlaziyo lwayo lwe-iOS, uGoogle kuye kwafuneka anyuse umdlalo wabo kwaye wawubhengeza & apos; unakekela umba wabucala okhoyo kudala
Ihlobo nje elidlulileyo, iApple yafumanisa ukuba uninzi lweapps, ezinje nge I-LinkedIn, iReddit, iindaba zikaGoogle , TikTok , Kwaye abanye, babesenza ubuthathaka obuye bashiya ii-clipboard zabanini be-smartphone abasesichengeni. Ngokukhawuleza ukuba ukope into kwifowuni yakho, ezinye iiapps zinokufikelela ngokuzenzekelayo kwaye ziyifunde nangaphambi kokuba uyincamathisele kwenye indawo.
Oku kunokuba kubi kakhulu kunokuba kuvakale ...
Xa ukopa into ukuyincamathisela kwenye indawo, njengomyalezo, olo lwazi luhlala lukopa ngonaphakade (okanye ude ukope enye into, ngesiqhelo). Ifowuni yakho & iklibhodi eqhotyoshwayo kulapho kugcinwa khona izinto ezikhutshelweyo, nokuba yeyombhalo, umfanekiso okanye ividiyo.
Khawufane ucinge ukuba awukhupheli inombolo yekhadi letyala ukuze ungafaki kwakhona ukuyifaka (into endisoloko ndiyenza)-ngubani owaziyo ukuba zingaphi ii -apps zomntu wesithathu ezinokugcina olo lwazi. Umcimbi wawungekho kwaye awuphelelanga kwii-iPhones, nokuba.
U-Apple walanda le ngxaki nge-iOS 14, xa wazisa isaziso esivelayo sokukwazisa qho xa iapp ifikelele kwibhodi eqhotyoshwayo, njengoko isenza ngemic kunye nokufikelela kwekhamera. Iifowuni ziyakwazi ukugcina inye kuphela kunye nokukopa into enye kwibhodi eqhotyoshwayo-kwaye ezo zinto ziyilezo Google zenzelwe i-Android ngokunjalo.
Nangona kunjalo, ukuba unayo Isamsung ifowuni, isigebenga saseKorea sikwenzile ukufikelela kwizinto ezingama-20 ezazikhutshelwe ngaphambili kwifowuni yakho & kwibhodi eqhotyoshwayo. (Nokuba une & apos; ngesixhobo esahlukileyo se-Android, unokuzikhuphelela usetyenziso olufana neClip Stack ukwandisa ubungakanani bebhodi eqhotyoshwayo.)
UGoogle ngokusisiseko ukhuphele-kwi-iOS 14
Ungaqala ukubona ukuba iiapps ezinokufikelela ngokungenamda kwibhodi yakho yokunameka ye-Android, ngokungaziwa kuwe, zinokubangela ingxaki enkulu. Kwaye-kude kube ngoku (okanye kwikamva elisondeleyo).
Ngokukhutshwa kwe-Android 12, uGoogle ulandela iApple & apos; amanyathelo kunye nokongeza ii-pop-ups ukukwazisa ukuba iklipboard yakho isetyenziswa yenye iapp. Ayisiyiyo kuphela into enomsebenzi ofanayo ne-Apple & apos; s, kodwa ii-pop-ups ziya kujongeka njengesaziso se-Apple, nazo.
Nangona kunjalo, kule meko, uGoogle ngokuqinisekileyo uza kwi-Apple eyodwa. Iya kubandakanya indlela yabasebenzisi abalixabisayo amava alungelelanisiweyo kulawulo olupheleleyo lokucima ukucima izaziso zobumfihlo bebhodi eqhotyoshwayo-into i-Apple engenayo & apos ayinayo okwangoku.
Yazi wena, inqaku elitsha lezaziso zebhodi eqhotyoshwayo lukukuhla nje kwibhakethi lento ezayo & thina: nathi sinee-juicy ezininzi i-tidbits malunga ne-Android 12 esiqokelelele wena. Iza kuba luhlaziyo olubalulekileyo, kwaye siza kuthi kakhulu!
Ixabisa malini ii-smartphones
Elona nqaku lililo le-8 yewallet
Iifoto zikaGoogle ziphelisa ukugcinwa simahla okungenasiphelo, kodwa ndiza kuqhubeka ndizisebenzisa
I-AT & T 5G / 5G E imephu yokugubungela inethiwekhi: zeziphi izixeko ezigutyungelweyo?
Ungayicima njani i-iPhone yakho
Inkxaso ye-WhatsApp iphela kwi-iPhone 4S
Ukunciphisa, ukusebenzisa kwakhona, ukuphinda usebenzise kwakhona: ukwenza ntoni ngefowuni endala okanye eyaphukileyo
I-Samsung yenze njani umbala we-Aura Glow we-Galaxy Note 10?
Ewe ungazicima ii -apps zesitokhwe kwi-iOS 10: nolu uluhlu kunye nezo ungazenza